विचार | Naya Yougbodh National Daily | Page 360 Free songs
Home / विचार (page 360)
खा“चो केवल अपांगमैत्री मनको
December 20, 2013	0 206 Views
जीतबहादुर शाह लडाइ“मा एकजना सैनिकलाई गोली लागेछ । अपरेसन गरेर गोली निकाल्ने क्रममा उनका दुइवटै खुट्टा काट्नुप¥यो । उनी अपांग भएछन् । बाथरुम जानेदेखि लिएर जीवनका धेरै कुराहरुमा उनलाई अरुको सहयोग आवश्यक पर्ने भएछ । यो कुरा उनले घरका आफन्तलाई भनेका थिएनन् त्यतिबेलासम्म । एकदिन ...
December 19, 2013	0 222 Views
डा. टीकाराम पोख्रेल उत्साहपूर्ण निर्वाचनको निकासविहीन परिणाम आएको छ । चुनावमा प्रतिस्पर्धीहरुको हारजित सामान्य भए पनि हारजितबाट आउने परिणामले भने सबैले जित्नुपर्दछ । जित्नेले त जित्ने नै भए हार्नेले पनि जितेको अथवा न्याय पाएको अनुभूति गर्नुपर्दछ । व्यक्ति विशेषले हारे पनि देश र ...
दाङमा दुर्घटना न्यूनीकरण अभियान
December 19, 2013	0 269 Views
डा. चिरायु रेग्मी सरकारी तथ्यांकअनुसार गएको वर्षमा नेपालमा सवारी साधन दुर्घटनाले करीब १ हजार ८ सयजनाको मृत्यु भयो । यसमध्ये करीब ३ सय अबोध बालबालिका र अधिकांश ‘कमाई’ गर्न सक्ने उमेर समूहका क्रियाशील युवाहरु मृत्यु भएको पाइन्छ । यो मृत्युको दरभन्दा करीब ...
मेरो देश, मण्डेला र मेलमिलाप
December 18, 2013	0 256 Views
विष्णुप्रभात दाहाल गधा धोएर गाई हु‘दैन बोका नारेर दाइ“ हु‘दैन जब सत्ताको मोलमोलाइ हुन्छ सरकार र संविधान कहिल्यै स्थायी हु‘दैन । एकजना मित्रले फेसबुक सञ्जालमार्फत शेयर गरेको विचार हो यो । नेपाली राजनीतिको विशेषता पनि ठीक यस्तै प्रकारको छ । संविधान बन्ला, कानूनको ...
अति राजनीतिको अराजनीति †
December 18, 2013	0 241 Views
नारायणप्रसाद पौडेल नेपाली गणतान्त्रिक राजनीतिको केन्द्रमा पुगेका कांग्रेस–एमालेहरु सत्ताको भागवण्डाको जोडघटाउमा लाग्दासाथ शहर बजारका चौक–चौराहाका चिया पसलमा नया“ चर्चा चल्न थालेका छन् । पुराना कुरा फेरि सम्झन थालेका छन् मान्छेले । भन्न थालेका छन्– फेरि पुरुष सांसद सुत्केरी हुने दिन आउने भए । ...
December 17, 2013	0 212 Views
सर्जन गौतम संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनपश्चात नयॉ जनादेश आइसकेको बेला राष्ट्रपतिको निर्वाचन हुनुपर्छ वा पर्दैन भन्ने विवाद चर्किएको छ । नेपाली कांग्रेस संविधानमा लेखिएको बाक्यांशअनुसार नयॉ संविधान जारी नहु‘दासम्म राष्ट्रपति पद कायम रहने तर्क गर्दै राष्ट्रपतिलाई चलाउन नहुने अडानमा कायम छ । अर्कोतिर ...
देश विकासमा किन खेलवाड ?
गुरुप्रसाद शर्मा रेग्मी मानिसले नचाह“दा नचाह“दै पनि समय र परिस्थितिले अनायास परिवर्तन ल्याइदिने गर्दछ । त्यसैले होला समयले कसैलाई पर्खिदैन । समयलाई पछ्याउन नसक्ने सधंै पछाडि पर्दछन् भन्ने कुरा सत्य रहेछ । नेपालमा जब पूर्व–पश्चिम राजमार्ग बन्यो । जिल्लाहरुलाई जोड्ने सहायक मार्गहरु बने । यसले ...
सहमतिको रागभित्र विमतिको खेती नगर
December 16, 2013	0 224 Views
डिल्लीबहादुर रावत बढीमा एक वर्षभित्र नेपाली जनतालाई संविधान दिन्छौं भन्दै निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरु होमिएका थिए । नेपाली जनताले कांग्रेस र एमालेलाई अकल्पनीय रुपमा संविधान बनाउन सक्ने मत दिएर विजयी बनाए । कांग्रेस र एमाले नाममा फरक भए पनि समान विचार भएका छन् ...
यो देश सुधारको समय हो
December 16, 2013	0 222 Views
पद्मप्रसाद शर्मा २०७० मंसिर ४ गते सम्पन्न संविधान सभा निर्वाचनले एक प्रकारको अन्योललाई चिरेको छ । विगत लामो समयदेखि स्थानीय निकायको निर्वाचन हुन सकिरहेको छैन । उता संविधानसभा विघटन भएपछि निर्वाचित प्रतिनिधिमा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति मात्र बा“की रहेका थिए । जुन संस्था अति ...
जनआन्दोलन, नया संविधान र नेपाली समाजको रुपान्तरण
December 15, 2013	0 238 Views
देवराज विश्वकर्मा २००७ सालमा नेपाली जनताले किन विद्रोहको झण्डा उठाए भन्दा तत्कालीन समाज, संवैधानिक व्यवस्था, राज्यबाट जनताले पाउनुपर्ने सेवा सुविधा समुचितरुपमा नपाएको महसुस गरेरै हो । त्यसबेला समाजको आवश्यकतालाई पूरा गर्न नसक्ने राज्य संयन्त्र हुन्छ भने जनता त्यो सरकार, त्यो संविधान, ...
Page 360 of 375« First...330340350«358359360361362»370...Last »